Some Of Computer Problem [Tips & Tricks]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Window Problems » Some Of Computer Problem [Tips & Tricks]
1 Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 28th November 2009, 11:04 pm
USB Virus များနှင့် ပတ်သက်လို.
... အခြားသူတွေပြောသလိုဘဲ pro တစ်ယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့
တွေ့ကြုံနေရတဲ့ usb virus များနဲ့ပတ်သက်လို့ forum များစွာကိုလည်း
ပြောပြချင်လို့ပါ။ အဓိက ကတော့ usb autorun နဲ့ folder အယောင်ဆောင် virus
တွေကို ကာကွယ် ကြမယ်ပေါ့ဗျာ။ (ကိုယ်တိုင်လဲသတ်လို့ရပါတယ်။)
USB Drive မထိုးခင် သတိပြုစရာ
၁။ Auturun ကို disable လုပ်မယ်။ gpedit.msc ကနေပေါ့ဗျား (အရင် forum
များလိုပေါ့)။ Local Computer Policy \_ User Configuration \_
Administrative Templates \_ System \_ Turn off Autoplay ဒါဆို autorun
ရန်က အတော်အသင့် လုံခြံုသွားပါပြီ။
၂။ Folder option မှ show hidden
file and folder ကို ရွေး၊ hide protected operating system file ကို
ဖြုတ်ထားသင့်ပါတယ်။ (ဒါမှ Autorun.inf ဖိုင်ကို မြင်ရမှာပါ။)
၄င်း drive ထဲကို ၀င်တဲ့အခါ Explorer ရဲ့ address ကနေ သူ့ရဲ့ drive root
(eg. E:, F:) စသည်ဖြင့် ရိုက်ပြီးမှ ၀င်သင့်ပါတယ်။ (ဒါမှ Autorun မတက်မှာ
၄။ အရင်ဆုံး Autorun.inf ဖိုင်ကို ရှာပါ။ သင်ဟာ virus ကို
သိလိုတယ်ဆိုရင်တော့ ၄င်း Auturun.inf ကို notepad နဲ့ဖွင့်ပြီး
ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ open = \_*any* လို့ ရေးထားတာ တွေ့ရလိမ့်မယ်။
၄င်းဖိုင် ကို ရှာပြီးဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ တချို့ virus များဟာ folder
ယောင်ဆောင်နေတာကိုလဲ သတိပြုရအုံးမယ်ဗျ။ ဒါကိုသိဖို့ က explorer မှာ detail
view နဲ့ ကြည့်ရင် မြင်နိုင်ပါမယ်။ သင်ရဲ့ folder အမှန်ဟာ hidden
ဖြစ်နေပြီး folder ယောင်ဆောင် virus ဟာ file type - Application
ဖြစ်နေမှာပါ။ သေချာချင်ရင်တော့ ၄င်း folder ပုံစံ တစ်ဖြစ်လဲ virus ပေါ်မှာ
R-Click \_ Property ၀င်ပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ (တချို့ မျက်စိ
လျှင်သူများကတော့ folder ယောင်ဆောင် virus ဟာ တစ်ကယ့် folder icon ထက်
resolution နည်းတဲ့ (graphic ကိုပြောတာ) ပုံစံဖြစ်နေတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။)
Thumbs.db, Desktop.ini တို့ဟာ system file များဖြစ်တာကိုတော့ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ဥမာပေးလိုတဲ့ virus ပုံစံတွေက- KillVBS, thG, 911(folder), Updater(folder), chrome စတဲ့ အမည်တွေပါ။
(တကယ်လို့ သင်ဟာ AntiVirus တခုခု တင်မထားဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် သင့် AntiVirus ဟာ out of date ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဒါဟာအသုံးဝင်မှာပါ။)
virus ကင်းရှင်းနိုင်ကြပါစေ။ (ပိုကောင်းတဲ့နည်းများရှိရင်လည်း ဝေမျှပေးစေလိုပါတယ် ခင်ဗျား။)
2 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 28th November 2009, 11:05 pm
ကဲ ၀င်းဒိုးပြသနာ အကြောင်းလေးတွေ ပြောရအောင်။
( 1 )ကျွန်တော်တို.တွေ နေ.စဉ်နဲ. အမျှကြုံတွေ.နေရတဲ့ ၀င်းဒိုးပြသနာတွေကို တစေ့တစောင်း အကဲခတ်ကြည့်ရအောင်ဗျား။
ကျွန်တော်တို. ၀င်းဒိုးစတက်လာချိန်မှာ၊ Desktop ကြီးတက်လာပြီး ကွန်ပြူတာက
အလုပ်လုပ်လို.မရသေးဘဲ အကြာကြီး စောင့်နေရတဲ့ ၀တ်ကိုကြွတ်ဖို.အတွက်၊Run
=> msconfig => ထဲမှာ Start Up ဆိုတဲ့ Tab မှာ ရှိသမျှ ချက်ဘောက်တွေကို
အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပေးထားလိုက်၊ ပြီးရင် OK နဲ. ထွက်၊ ပြီးရင် ကွန်ပြူတာ
Restart ကျသွားမယ်။ ပြန်တက်လာရင်တော့ ၀င်းဒိုးပွင့်တာ မြန်သွားပါလိမ့်မယ်။
(2)Folder Option ပျောက်နေရင််
ကျွန်တော်တို.ကွန်ပြူတာတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ Folder Option ပျောက်နေတာ
လေးတွေကို ပြန်ဖော်တဲ့ နည်းလေး အရင်ပေးကြည့်မယ်။ တကယ်လို.
ခင်ဗျားကွန်ပြူတာမှာ Folder Option ပျောက်နေပြီဆိုရင်
ဒီအတိုင်းစလုပ်ရမှာပါ။ ပထမဦးဆုံး Start Menu => Run => အဲဒီ
ဘောက်လေးပေါ်လာပြီဆိုရင် regedit လို.ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်။ Registry
Editor ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါမှာ ကျွန်တော််ပြောတဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်း
ဆက်သွားပါ။ Registry Editorထဲက My computer => HKEY_CURRENT_USER =>
software => Microsoft => windows => Current version =>
Policies => Explorer မှာ ညာဘက်ကလစ်နှိပ်ပြီး New => DWORD Value
ဆိုတာကိုရွေးပေးပါ။ New value တစ်ခု ညာဘက်ချမ်းမှာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီပေါ်မှာ ညာဘက်ကလစ်နှပ်ပြီး Modify ဆိုပြီးပြောပါ။ Value data မှာ 0
ဆိုရင် ရပါပြီ။ အဲဒါမှ Folder Option ပြန်မပေါ်လာသေးဘူး ဆိုရင် ၀င်းဒို
Restart ချလိုက်ရင် ပြန်တက်လာတဲ့ အခါ Folder Option
Last edited by Fox on 13th August 2011, 1:20 am; edited2times in total (Reason for editing : Setup နှင့် Start UP ပြင်လိုက်ပါသည်။)
3 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 28th November 2009, 11:06 pm
(3)Registry Editor ခေါ်လို.မရရင််
တကယ်လို.များ Run ထဲမှာ regedit လို.ရိုက်တာ Registry Editor ပေါ်မလာပဲ
Error ကျလာပြီဆိုရင်တော့ Registry Editor ကို အန်နေဘယ်
ပြန်လုပ်ပေးလို.ရပါတယ်။ ပြန်လုပ်ပေးဖို.ရာ။ Start => Run ထဲမှာ
gpedit.msc ဆိုပြီး Enter ခေါက်။ Group Policy Editor ပေါ်လာလိမ့်မယ်။
အဲဒီမှာ User Configuration => Administrative Templates => system
ဆိုတာပေါ်မှာ select မှက်လိုက်ရင် ညာဘက်ချမ်းမှာ Pervent Access to
registry editing tools ပေါ်မှာ ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ် ပါ။ Enabled
ဆိုတာကိုရွေးပေးပါ။ Apply ရယ် OK ရယ်ကိုနှိပ်ပေးပါ။ Group Pokicy Editor
ကိုပါပိတ်လိုက်ပါ။ အဲဒါမှာ Registry ကိုခေါ်လို.မရသေးဘူးဆိုရင် ခုနက
လမ်းကြောင်းအတိုင်း ပြန်ဝင်ပြီး Enabled လို.ရွေးခဲ့တဲ့နေရာမှာ Not
configured ဆိုတာကိုပြန်ရွေးပေးပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ တကယ် Registry
4 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 28th November 2009, 11:06 pm
(4)Task Manager ပျောက်နေရင်
Task Manager ပျောက်နေတာလေး ပြန်ခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Start => Run
ထဲမှာ gpedit.msc ဆိုပြီး Enter ခေါက်။ Group Policy Editor
ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ User Configuration => Administrative
Templates => system => Ctrl+Alt+Del Options မှာ select
လုပ်လိုက်ရင် ညာဘက်ချမ်းမှာ Remove Task Manager ဆိုတာပေါ်မှာ
ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ် Disabled ဆိုတာကို ရွေးပေးပါ။ ပြီးရင်် Apply ရယ် OK
ရယ်ကိုနှိပ်ပေးပါ။ Group Policy ကိုပိတ်လိုက်ပါ။ အဲဒါမှ
ပြန်မပေါ်သေးဘူးဆိုရင် ခုနကလမ်းကြောင်း အတိုင်းပြန်ဝင် Remove Task Manager
ကိုရောက်ရင် ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီး Not configured ကိုပြန်ရွေးပေးရပါမယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ ကျိန်းသေ ပြန်ပေါ်လာပါလိ်မ့်မယ်။
5 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 28th November 2009, 11:07 pm
(5)Scream shot ယူဖို.ရာ။
အနေနဲ. scream shot ယူနည်းလေး ပြောပြမယ်။ ဘယ်နေရာမှာသုံးဖို.လဲဆိုရင် ဥပမာ
အခု ကိုယ့်ကွန်ပြူတာမှာ မြင်နေရတဲ့ ပုံစုံမျိုးကို အွန်လိုင်းက
အခြားသူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကို ပြချင်ပါတယ်ဆိုရင် မော်နီတာကြီးကို
ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ပို.စရာမလိုပါဘူး။ ဒါမျိုးလေး စမ်းလုပ်ကြည့်ပါ။ Ctrl +
Print Screen Sys Rq ဆိုတဲ့ ကီးလေး နှစ်ခုကို နှိပ်လိုက်ရင် အခုလက်ရှိ
မော်နီတာမှာ မြင်နေရတဲ့ မြင်ကွင်းကို ကော်ပီကူးလိုက်တဲ့ ပုံစံ ပါပဲ။
အဲဒီလို ကော်ပီကူးထားတဲ့ ပုံကို Paint ထဲမှာ သွားပြီး Paste
လုပ်ပေးရပါမယ်။ Paint ကိုသွားဖို.ရာ start => Run => mspaint
ဆိုပြီး Enter ခေါက်ပါ။ ပြီးရင် Ctrl + V ဆိုပြီး paste လုပ်ပါ။ ပြီးရင်
6 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 28th November 2009, 11:07 pm
(6)ကိုယ်ဆောက်ထားတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ဖိုဒါကို အခြားလူ ဖွင့်ကြည့်လို.မရ၊ Delete လုပ်လို.မရအောင်လုပ်ထားမယ်။
ပထမဦးဆုံး ကိုယ်လုပ်မယ့် ဖိုဒါက NTFS နဲ.ပိုင်းထားတဲ့ Partation
ပေါ်မှာရှိရပါမယ်။ ပြီးရင် My Computer ကိုဖွင့်။ Menu Bar က View Tab ကို
၀င်ပါ။ ဟိုးအောက်ဆုံးစာကြောင်း Use sinple file sharing ( Recommended )
ဆိုတဲ့ ချက်ဘောက်လေးကို အမှန်ခြစ် ဖြုတ်ပေးထားရပါမယ်။ ပြီးရင် OK နဲ.ထွက်။
ကဲစမယ် ကိုယ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ ဖိုဒါပေါ်မှာ ညာဘက်ကလစ်နှိပ် ။ Sharing and
Security ဆိုတာကိုဝင်။ Security ဆိုတဲ့ Tab မှာ Advance ကို ကလစ်နှိပ်။
ပြီးရင် အောက်နားက Inherit from parent the permission entries that apply
to child objects. Include these with explicitly defined here ဆိုတဲ့
နေရာမှာ အမှန်ခြစ်လေး ဖြုတ်ပေးရပါမယ်။ ပြီးရင် Remove လို.ပြော။ Apply ၊
OK ၊ OK ပေါ့။ ဒါဆို ကိုလုပ်ထားတဲ့ ဖိုဒါကို ဘယ်သူမှ ဖွင့်လို.လဲရမှာ
မဟုတ်သလို Delete လဲလုပ်လို.ရမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ပြန်ဖွင့်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အဲဒီဖိုဒါပေါ်မှာ ညာဘက်ကလစ်ပြန်နှိပ် sharing
and security ကိုဝင် ပြီးရင် Owner ဆိုတဲ့ Tab ကို သွားပါ။ Administrator
ပေါ်မှာ select မှက််ပြီး Reblace owner in subcontainers and objects
ဆိုတဲ့ စာကြောင်းမှာ အမှန်ခြစ်လေး ပြန်ထည့်ပေးရပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ OK
ပေါ့။ ဒါဆိုရင်တော့ ပြန်ဝင်လို.ရပါပြီ။
7 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 28th November 2009, 11:07 pm
(7) Font Problem For Gtalk။
ဇော်ဂျီဖောင့်လဲရှိတယ်၊ ဇော်ဂျီကီးဘုတ်လည်း အင်စတော လုပ်ထားရဲ့သားနဲ.
GTalk မှာ မြန်မာလိုရိုက်တာ လေးထောင့်ကွပ်တွေ ပေါ်နေရင်။GTalk Box
ကိုဖွင့် Settings ထဲဝင်။ Chaing Font... ကိုကလစ်လုပ်ပြီး Zawgyi-One
I.E မှာဆိုရင် Tools Tab ကနေ Internet Option ကိုဝင် General Tab ထဲက Fonts ဆိုတာထဲဝင် Zawgyi-One ဆိုတဲ့ဖောင့်ကို ရွေး။
Mozilla Firefox မှာဆိုရင် Tools Tab ကနေ Option ကိုဝင် Content ဆိုတဲ့
Tab မှာ Defaunt font ဘေးမှာ Zawgyi-One ဆိုတဲ့ဖောင့်ကို ရွေး။
8 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 28th November 2009, 11:08 pm
( 8 ) Torrent Download လုပ်ကြမယ်။
ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲ ဒါမှမဟုတ်၊ Bittorrent ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲတစ်ခုခုကို
အင်စတောလုပ်ပေးရတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒီဆော့ဝဲတွေက freedom နဲ.မှအလုပ်လုပ်တာ
အရင်ဆုံး Freedom ကိုအရင်သွင်းရမယ်။ ပြီးရင် Utorrent ကိုသွင်းပြီး
Freedom နဲ.ချိတ်။ ပြီးရင်တော့ ဆော့ဝဲတွေကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပေတော့ဗျိုု.
Full Version တွေကြီး ရမှာ ဗျ။ အရမ်းကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ်
ဆော့ဝဲတွေဒေါင်းလော့လုပ်ရင်လည်းတော်တော်လေးကြာတယ်။ ရတဲ့ ဆော့ဝဲတွေကတော့ တန်ဖိုးရှိတာပေါ့ဗျာ။
9 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 28th November 2009, 11:08 pm
(9)Comand Prompt လေးပြန်ခေါ်ရအောင်ဗျာ။
comand prompt လေးပျောက်သွားရင် ဒီလိုလုပ်ဗျာ။c:\_windows\_system32 အောက်မှာ cmd.exe ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးကို အရင်ရှာကြည့်၊
ရှာလို.တွေ.ပြီဆိုရင် ကလစ်လုပ်ပြီးဖွင့်။ မရှိဘူးဆိုရင်တော့ တခြားစက်ကနေ
ယူရလိမ်မယ်။ အမှန်က cmd.exe ပျက်သွားရင်တောင် ပြန်ခေါ်လို.ရအောင်
၀င်းဒိုးက ကူညီပေးတယ်။အဲဒီတော့ cmd ကို တနေရာကနေပိတ်ထားတာ ဖြစ်မယ်။
10 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 28th November 2009, 11:14 pm
တခြားညီအကိုများကလည်း ရေးပေးကြပါလို ့မစ်တာရပ်ခံပါတယ်။ အကျိူးရှိမယ်လို ့တော ့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော ့post လေးက....ညီအကိုတို့အကျိူးရှိကြရဲ ့လားဗျာ။ reply post များမလာရင်တော ့.....အကျိူးမရှိလို ့ထင်ပြီး စိတ်မကောင်းစွာ နဲ ့မတင်တော ့ဘူးဗျာ...
11 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 29th November 2009, 8:52 am
ogre wrote: တခြားညီအကိုများကလည်း ရေးပေးကြပါလို ့မစ်တာရပ်ခံပါတယ်။ အကျိူးရှိမယ်လို ့တော ့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော ့post လေးက....ညီအကိုတို့အကျိူးရှိကြရဲ ့လားဗျာ။ reply post များမလာရင်တော ့.....အကျိူးမရှိလို ့ထင်ပြီး စိတ်မကောင်းစွာ နဲ ့မတင်တော ့ဘူးဗျာ...
တစ်နေရာရာက တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် ကျနော်တို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ အကျိုးကတော့ ရှိနေမှာပါ။
ဖိုရမ်စလုပ်ကတည်းက ကျနော်တို့ဆို Reply မရှိဘဲနဲ့ အရူးတစ်ယောက်လိ်ု ရေးခဲ့ရတာပါ။
အဲဒီ့တော့ အစ်ကိုလည်း reply မလုပ်တိုင်းတော့ ဆက်မရေးတော့ဘဲ မနေပါနဲ့လို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
ဆက်ရေးပါ။ တစ်ချိန်ချိန်တော့ Reply တွေ ပြန်ကြမှာပါ။
12 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 29th November 2009, 8:59 am
စိတ်မကောင်း မဇြစ် ပါ နဲ. အစ်ကို ရာ
reply မလုပ်တိုင်းတော့ ဆက်မရေးတော့ဘဲ မနေပါနဲ့လို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
စေတနာ ဟာ လူတိုင်းနဲ. တန်ပါ တယ်
ကျနော် မသိသေးတာတွေ သိရတဲ.အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါ တယ်
13 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 29th November 2009, 9:34 am
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2009-11-29
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကို ogre.. ကျွန်တော်မသိတာတွေသိလိုက်ရလို ့ပါ။
14 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 1st December 2009, 7:02 pm
10. ဘန်းကျော်ကြမယ်ဟေ ့
ဘန်းထားတဲ့site တွေကိုကျော်ချင်ကြတယ်ဆိုရင်ဖြစ်
Mozilla Browser => Tools => Add ons ကို click အရင်လုပ်လိုက်ပါဗျာ။
အဲပြီးသွားပြီးဆိုရင်တော့Get Add Ons ရဲ ့အောက်က Search box မှာ phzilla ဆို ပြီးရှာပြီး
install လုပ် လိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင် firefox ကို restat လုပ်ခိုင်းပါလိမ် ့မယ်။ restart ချလိုက်ပါ ခဏ wait လိုက်ပါ။ firefox ပြန်တက်လာပါလိမ် ့မယ်။ ဒါဆိုအဆင်ပြေသွားပါလိမ် ့မယ်။ စမ်းပြီး ဘန်းထား
တ ့ဲ blogspot ကို ၀င်ကြည် ့လိုက်ပါ။ "The access to requested URL has been denied." လို ့
ပြပါလိမ် ့မယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့address ဘားကို arrow လေးတင်လိုက်ပါ။ " P " ဆိုတာကို တွေ ့ပါလိမ် ့ပါ။
ဒါဆိုကျော်သွားပါလိမ် ့မယ်။ FireFox ရဲ့Add Ons တွေ ကို သေချာကြည် ့ပြီး ပေါင်းထည် ့ခြင်းဖြင် ့
တုနိူင်းမရတဲ့ အရာလေးတွေကိုမြင်ကြရမှာပါ။ ဘန်းကျော်သလိုပဲ Rapidshare က Download လုပ်
ခြင်သူများကလည်း Getmonkey လေးကိုပေါင်းထည် ့ပေးကြပေါ ့။ ကျွန်တော်ပြောနေတာ နဲ့့ကြာနေမယ်။ကဲ စမ်းသာကြည် ့ကြတော ့ဗျာ။
Last edited by ogre on 4th December 2009, 9:41 pm; edited 1 time in total
15 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 2nd December 2009, 8:01 am
ကို orge ရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ညာ
phzilla addon လေးရလိုက်တာ တော်တော်တန်ဘိုးရှိပါတယ်
ကတော့ ရှာလို ့မရဘူး..ခင်ဗျ
ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး.
no matching add on လို ့ပြနေတယ် [You must be registered and logged in to see this image.]
16 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 2nd December 2009, 9:14 am
solakoko wrote: ကို orge ရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ညာ
Greasemonkey ကို ပြော တာ လား ဟင်
17 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 2nd December 2009, 9:31 am
ကို orge ပြောတဲ့
Rapidshare က Download လုပ်
ခြင်သူများကလည်း Getmonkey လေးကိုပေါင်းထည် ့ပေးကြပေါ ့။
Getmonkey add on ကိုရှာတာမတွေ ့ဘူးလို ့ပြောတာပါ
18 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 2nd December 2009, 3:11 pm
19 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 2nd December 2009, 6:32 pm
ဟုတ်ပါ ့ဗျာ ဖြီးတာများ သွားလို ့မှားသွားတာ။ Greasemonkey add ons လေးပါဗျာ။
20 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 3rd December 2009, 9:27 am
Nice post Ogre !
ThX fo' sharing !
21 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 3rd December 2009, 10:42 am
တခြားညီအကိုများကလည်း ရေးပေးကြပါလို ့မစ်တာရပ်ခံပါတယ်။ အကျိူးရှိမယ်လို
့တော ့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော ့post လေးက....ညီအကိုတို့အကျိူးရှိကြရဲ ့လားဗျာ။
reply post များမလာရင်တော ့.....အကျိူးမရှိလို ့ထင်ပြီး စိတ်မကောင်းစွာ နဲ
ကျနော်လဲ အကျိုးရှိလို ရှိငြား ပေါ့
တစ်ချို အကျိုးရှိနိုင်မယ်ထင်လို့ကောင်းနို်းရာရာလေးတွေကို ရှာဖွေလှန်လှော လို ့ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျနော့်အလှည့်တုန်းက တိုင်ပတ်ခဲ့ဖူးလို ့ပါ
ဘာမှလဲမသိ..ပြောပြမဲ့သူလဲမချိနဲ ့..ပြဿနာတွေ ဒီအတို်င်းပစ်ထားဖူးတယ်ခင်ဗျ
အခုလဲ မရှင်းတတ်လို ့ပစ်ထားတုန်းပါပဲ .အဟိ
ကဲကဲ...let start the show!
Show Hidden File and Folder
File and Folder. လို.ပြောလိုက်တိုင်း Apply တောင် မလုပ်ရသေးဘူး။ Do not
Show Hidden File and Folder. ဆိုပြီးပြန်ပြန် ဖြစ်နေတာ တစ်ချို
Registry Editor ပေါ်လာရင် ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ HKEY_CURRENT_USER
အောက်က Software အောက်က Microsoft အောက်က Windows အောက်က CurruntVersion
အောက်က Explorer အောက်က Advanced ဆိုတဲ့ ဖိုဒါပေါ်မှာ select မှက် လိုက်ရင်
ညာဘက်ခြမ်းမှာ Hidden ဆိုတာလေးကို တွေ.လိမ့်မယ်။
Hidden ဆိုတာလေးပေါ်မှာ ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်။ Value Data
အောက်မှာ 1 ဆိုရင် show hidden file and folder ပါ။2တို.0တို.
ဖြစ်နေရင် ဖိုဒါတွေ ဖိုင်တွေ မှိန်ပြီး Do not show hidden file and
အဲဒါမှမပေါ်သေးဘူးဆိုရင်။ ဗိုင်းရပ်ကို မရမ်းအောင်လုပ်ရပါမယ်။
startup ထဲမှာ ဗိုင်းရပ်ကို ပိတ်ထားတာမျိုး။ Bat ဖိုင်တွေနဲ.သတ်တာမျိုး
အရင်လုပ်ပေးပါ။ ဗိုင်းရပ် နဲနဲ ငြိမ်သွားပြီဆိုရင်
start=>run ထဲမှာ regedit ဆိုပြီး အန်တာခေါက်။ အောက်ကလမ်းကြောင်းအတိုင်း ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ဖိုဒါတွေကို ဖွင့်ပေးပါ။
ံHKEY_LOCAL_MACHINE အောက်က software အောက် Mirosoft အောက်က windows
အောက်က Currentversion အောက်က Explorer အောက်က Folder အောက်က Hidden
အောက်က Showall ဆိုတဲ့ ဖိုဒါပေါ်မှာ select မှက်ပြီး ညာဘက်ခြမ်းမှာ ကြည့်ပါ။
Checkedvalue ဆိုတာကို တွေ.ပါလိမ့်မယ် ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ် ပေးလိုက်ပါ။
ကဲ Value Data ကို0တို.2တို. ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် 1 ကို ပြန်ထားပေးရပါမယ်။
ကဲဒါဆိုရင်တော့ show Hidden file and Folder လုပ်ရင် အဆင်ပြေသွားပါပြီ။
Pen Drive ကို virus မဝင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်
ကိုယ်ရဲ့ pen drive ထဲကဖိုင်တွေကို တနေရာမှာ Backup လုပ်ပြီး Format
ရိုက်ထားပါ။ Format ရိုက်တာကတော့ သိပ်ထွေထွေထူးထူး မပြောချင်ဘူး။
My computer ဖွင့်ပြီး ကိုယ် Pen Drive ပေါ်မှာ ညာဘက်ကလစ်လုပ်ပြီး Format လိုပြော။
ပြီးရင် start လို.ပြော။ Data တွေပျောက် ကုန်မယ်လို. သူက သတိပေးရင် ok လို.ပြောလိုက်။
ပြီးရင် format complate လို.ပြောရင် ok လို.ပြောလိုက်။
ပြီးရင် start ထဲကနေ run ထဲမှာ cmd ဆိုပြီး အန်တာခေါက်။
command ဘောက်စ်လေး ပေါ်လာပြီဆိုရင် ဒီလိုလေးရိုက်ပေး။ convert e:
/fs:ntfs ဆိုပြီး အန်တာခေါက် e: ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Pen Drive Latter
ပြီးရင် သူ. ဘာသာ NTFS File system ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။
ပြီးရင်။ ကိုယ့်ထည့် ချင်တဲ့ ဒေတာတွေကို ကိုယ် Pen Drive ထဲကို ပြောင်းထည့်လို.ရပါပြီ။
ပြီးရင် My computer ထဲမှာ Tools ထဲက Folder Option ကိုဖွင့်ပါ။
View Tab ထဲမှာ ဟိုး အောက်ဆုံးက Use simple file sharing ဆိုတာကို အမှန်ခြစ် ဖြုတ်ပေးပါ။ ပြီးရင် Apply , OK ပေါ့။
ပြီးရင် My computer ထဲက ကိုယ်ရဲ့ Pen Drive ပေါ်မှာ ညာဘက်ကလစ်လုပ်ပြီး Properties လိုပြောပေးပါ။
security Tab ထဲမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် Full control ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
အဲဒီမှာ Full Control ဆိုတာရယ်။ Modify ဆိုတာရယ်။ write ဆိုတာရယ်ကို အမှန်ခြစ် ဖြုတ်ပေးရပါမယ်။ ပြီးရင် Apply , Ok ပေါ့။
အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ ကိုယ်က Full Control ပြန်မလုပ်သရွေ.
ဖိုင်တွေ ထပ်ထည့်လို.မရတော့ပါဘူး။ အထဲက ဖိုင်တွေကိုတော့ ပုံမှန်ယူသုံးလို.
ကိုယ်က Full Control ပြန်မလုပ်သရွေ. ဗိုင်းရပ်တွေကလည်း ကျွန်တော်တို. Pen Drive ထဲကို ၀င်လာနိုင်စရာမရှိတော့ဘူးပေါ့။
computer ထဲ virus ၀င်နေရင်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
ကိုယ့်ကွန်ပြူတာမှာ Virus ရှိ၊ မရှိကို အလွယ်တကူ စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Antivirus Software မရှိဘဲ စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းများစွားရှိပါသည်။
အရင်ဆုံးစစ်ဆေးကြည့်ရှု စစ်ဆေးကြည့်ရှုမှာကတော့* Tools Menu က Folder
Options ပျောက်နေခြင်း* Command Prompt, Registry, Task Manager
ကို၀င်တိုင်း ကွန်ုပြူတာ Restart ကျနေခြင်း* Administrator Account
ဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ Registry Editor, Task Manager ဖွင့်မရခြင်း* Hidden Files,
Hidden System Files တွေကို ဖော်မရဖြစ်နေခြင်း* Folder တွေကို Double
Click နှိပ်လိုက်တိုင်း My Document Folder ပဲပေါ်နေခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ်
Folder လည်း မပွင့် ဘာမှလည်းမတတ်လားခြင်း* Memory Stick ရဲ့ Drive ပေါ်မှာ
right click နှိပ်လိုက်ရင် Open က ထိပ်ဆုံးရောက်နေ မယ့်အစား Autoplay က
ထိပ်ဆုံးရောက်နေခြင်း* Drive တွေ၊ Memory Stick တွေကို Double click
နှိပ်လိုက်တိုင်း OpenWith Box ပဲပေါ်လာခြင်း* Memory Stick ထဲက Folder
တွေပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပြီး properties ကိုရွေးရင် Type မှာ File
Folder လို့ပေါ်နေမယ့်အစား Application လို့ပေါ်နေခြင်း* My Folder ဆိုတဲ့
Folder အောက်မှာ MyFolder.exe ကိုတွေ့မြင်နေရခြင်း (Folder ၏
နာမည်နှင့်တူသော exe ၀င်ရောက်နေခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။)* Task
Manager ကိုဖွင့်ပါ။ (Ctrl+Alt+Del). Flashy, Fun, New Folder စတဲ့
Process တွေနဲ့ မသင်္ကာဖွယ်ရာ Process တွေ Run နေခြင်း (Run နေတယ်ဆိုရင် ဘယ်
Memory Stick မှမတပ်ပါနှင့်။ Virus ချက်ချင်း ကူးစက်ခံနိုင်ရပါတယ်။ Stick
ကို Format ချလည်းအပိုပါပဲ။ ကိုယ်က Format ချပြီးတာနဲ့ Virus
ကပြန်ဝင်နိုင်ပါသည်။)အထက်ပါ အချက်တွေထဲက တစ်ခုခု ဖြစ်နေရင် ကွန်ပြူတာမှာ
သေချာသလောက်နီးပါး Virus or Trojan or spyware တစ်ခုခု
စက်ထဲမှာရှိနေပြီလို့ ယူဆနိုင်ပါသည်။ အခြားစစ်ဆေးနည်းတွေ
အများကြီးရှိပါသေးသည်။ ပိုသေချာအောင် Antivirus Software တစ်မျိုးမျိုးကို
install လုပ်ပြီး Full Scan Run ကြည့်ပါ။ Virus ၀င်တာသေချာပြီးဆိုရင်တော့
Virus ကို အရင်သတ်လိုက်ပါ။ Virus Backup တောင်မလုပ်ထားပါနှင့်။ Backup
လုပ်ထားတဲ့ Virus ကအန္တရာယ်ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ တကယ့်ပြဿနာက Virus တွေကို
အပြတ်ရင်းပြီးသည့်တိုင်အောင် Folder Options လို Feature မျိုး
ပြန်မပေါ်လာဘူးဆိုရင် Hard Disk ကို Format ချပြီး Windows အသစ်တင်တာမျိုး
မလုပ်ပါနဲ့။ Folder Option, Task Manager and Registry တို့ကို Tools
တချို့အသုံးပြုပြီး ပြန်လည်ဖော်ထုတ်လုပ်ရပါတယ်။ အရင်ဆုံး System Restore
Point တစ်ခုကို ဖန်တီးပါ။Start > All Programs > Accessories >
System Tool > System Restore ကိုဖွင့်ပါ။ Createarestore point
ကိုရွေးပြီး Next ကိုနှိပ်ပါ။ Restore point description မှာ
နာမည်တစ်ခုပေးပါ။ (ဥပမာ Before Repair ဆိုတာလိုမျိုးပေါ့။) ပြီးရင် Create
ကိုနှိပ်ပါ။ Restore Point Created လို့ပေါ်လာရင် Restore point တစ်ခုကို
အောင်မြင်စွာဖန်တီးနိုင်ပါပြီ။ Close ကိုနှိပ်ပြီး ထွက်ပါ။Registry Editor
ကိုအသုံပြုပြီး ပြင်ဆင်မှာ ဖြစ်လို့ Registry Database ကို backup
လုပ်ထားနည်းStart > Run ကိုဖွင့်ပါ။ regedit လို့ရိုက်ထည့်ပါ။ File
> Export ကိုရွေးပါ။ နာမည်တစ်ခုကို ပေးပြီး save လုပ်ပါ။Windows ကို
Repair လုပ်နိုင်ဖို့ အတွက် Windows XP install CD
တစ်ချပ်ရှိထာဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ Windows CD တိုင်းကတော့ Windows ကို
Repair လုပ်ပေး နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Windows XP Professional Service
Pack 8 in 1 ဆိုတဲ့ CD နဲ့ဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေနိုင်ပါသည်။ အဲဒီ CD နဲ့
Windows XP ကို Repair လုပ်နိုင်ပါတယ်။ System Restore Point နဲ့ Registry
ကို backup လုပ်ပြီးပြီးဆိုရင် အရေးကြီးတာတစ်ခု လုပ်ရပါလိမ့်မည်။ Data
တွေကို Backup လုပ်ထားဖို့ပါပဲ။ Task Manager, Registry Editor and Folder
Options ကိုဖော်ယူခြင်းTask Manager, Registry Editor and Folder Option
ကိုဖော်ယူဖို့အတွက် အရင်ဆုံး ကွန်ပြူတာမှာ Virus ကင်းဖို့လိုပါသည်။ပထဆုံး
Task Manager ပွင့်၊ မပွင့် ကြည့်ပါ။ Start > Run မှာ taskmgr
လို့ရိုက်ထည့်ပါ။ (Crtl + Alt + Del). Task manger has been disabled by
your administrator” လို့တွေ့ရရင် Task Manger ကို Virus
ကတော့ပိတ်သွားပြီလို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ Task Manager ကို registry
ကနေပြန်ဖွင့်ရလိမ့်မယ်။Start > Run မှာ regedit လို့ရိုက်ထည့်ပါ။
Registry ပွင့်တယ်ဆိုရင် Task Manager and Folder Options ကို Manual
Policies\_Explorer မှာ No Folder Options ဆိုတဲ့ Key ကိုတွေ့ရင်ဖျက်ပါ။
(Right Click >
Policies\_System မှာ “Disabled TaskMgr” ဆိုတဲ့ Key ကို
Policies\_Run က Key တွေအားလုံးကိုလည်းဖျက်ပါ။ အဲဒါတွေက ကွန်ပြူတာ
ဖွင့်ဖွင့်ချင်းမှာ တက်လာမယ့် Program စာရင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ Virus က အဲဒီ
နေရာကနေ စတင် Run တာပါ။ အားလုံးပြီးရင်တော့ ကွန်ပြူတာကို Restart ချပါ။
Folder Options and Task Manager ပြန်ရမရစစ်ပါ။ ပြန်မရဘူးဆိုရင် Registry
ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးHKEY_CURRENT_USER\_ Software\_ Microsoft\_Windows\_C
urrentVersion\_ Policies\_ Explorer ကိုပြန်သွားပါ။ “No Folder Options”
ပြန်ရောက်နေတယ်ဆိုရင် Virus မသေသေးပါ ဘူး။ Virusအကယ်၍ Registry ပွင့်ပြီး
ကွန်ပြူတာ Restart ကျသွားရင်တော့ ကွန်ပြူတာမှာ Virus ရှိနေပါသေးတယ်။
ပြီးတော့ Run လည်း run နေသေးပါတယ်။ Virus ကင်းအောင် အရင် လုပ်သင့်ပါတယ်။
(Kaspersky ကိုအသုံးပြုရင် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။)ဒါမှမဟုတ် “Registry
editing had been disabled by your administrator” လို့တွေ့ရရင် Registry
ကိုလည်း Virus ကပိတ်သွားပါပြီ။ အဲဒါဆိုရင်တော့ Tools
တစ်ခုခုသုံးမှအဆင်ပြေနိုင်ပါတော့မည်။ (e.g Cover XP). အဲဒါတွေအပြင်
iRepair Man လို့ခေါ်တဲ့ Program လေးတစ်ခုကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သူက
Folder Options, Task Manager and Registry ကိုပြန်ဖွင့်ပေးပါလိမ့်မည်။
[You must be registered and logged in to see this link.] မှာ Download ချယူနိုင်ပါသည်။Folder တွေကို
Double Click နှိပ်လိုက်တိုင်း My Documents Folder ပေါ်နေခြင်း၊
ဘာမှမတက်လာခြင်း။Folder တွေကို Double Click နှိပ်လိုက်တိုင်း My
Documents Folder ပေါ်နေခြင်း၊ ဘာမှမတက်လာခြင်း ဖြစ်နေပြီးဆိုရင်တော့ အဲဒီ
Folder ဟာ User ရဲ့ Folder အရောင်ဆောင်ထားတဲ့ Virus တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ File ကို Right click နှိပ်ပြီး Type of file မှာကြည့်ကြည့်ပါ။File
Folder လို့ပေါ်နေမယ့်အစား Application လို့ပေါ်နေတယ်။ User ဟာ Folder ကို
Double click လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနှင့် ကွန်ပြူတာထဲကို Virus
ကတန်းဝင်သွားပါပြီ။ များသောအားဖြင့် Virus ကိုက်နေတဲ့ စက်မှာ သွားတပ်မိတဲ့
Memory Stick တွေမှာ တွေ့ရများပါသည်။မှိန်နေတဲ့ Folder တွေကတော့ User ရဲ့
Folder အစစ်တွေပါပဲ။ ထင်းနေတဲ့ Folder တွေကတော့ Folder အယောင်ဆောင် File
လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ File ကို Select လုပ်လိုက်တဲ့ အခါ Detail မှာ
Application လို့ပေါ်နေတာကို သတိထားမိမှာပါ။ မှိန်နေတာလေးတွေကို
မြင်ရတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ Folder တွေပါ၀င်တဲ့ Drive တစ်ခုလုံးကို Virus Scan
စစ်ပေးပါ။ ထင်းနေတဲ့ အယောင်ဆောင် Virus အားလုံးကိုတော့ Antivirus Software
ကဖျက်သွားပါလိမ့်မယ်။ မှိန်နေတဲ့ Folder တွေကို Select လုပ်ပြီး File >
Properties ကိုရွေးပါ။ Hidden မှာ Click ဖြုတ်ပါ။ Apply > OK
ကိုနှိပ်ပါ။ ပြန်မြင်ရပါလိမ့်မည်။တကယ်လို့ မမြင်ရတော့ဘူးဆိုရင် Tools >
Folder Options > View > Do not show hidden files and folder
ကိုရွေးထားမိလို့ မမြင်ရတာပါ။ အဲဒါကို Show hidden files and folder ကို
ပြောင်းရွေးရင် Hide ဖြစ်နေတာတွေပြန်မြင်ရလာမှာပါ။ တစ်ခါတစ်လေမှာ Show
hidden files and folder ကိုရွေးတာတောင် Tools > Folder Options >
View > Do not show hidden files and folders ကိုပြန်ရွေးကြည့်ရင် Do
not Show ပဲပြန်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ (အဲဒါက Rootkit တွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့
ပြဿနာပါ။ Windows ကို repair လုပ်မှပြန်ကောင်း လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။)
နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ keyboard ပေါ်က F3 ကိုနှိပ်ပါ။ Search Box တက်လာရင် All
files and folders ကိုရွေးပါ။ More advanced Options က Search hidden
files and folders ကိုအမှန်ခြစ်လုပ်ပေးပါ။All or part of the file name
မှာ *.* လို့ရိုက်ထည့်ပြီး Search ကိုနှိပ်ပါ။ မှိန်နေတဲ့ Folder တွေကို
select လုပ်ပြီး File > Properties ကိုရွေး၊ Hidden မှာ
အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပြီး Apply > OK ကိုရွေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။ သူများစက်မှာ
သွားတပ်လာတဲ့ Memory stick ကို ကိုယ်စက်မှာတပ်ပြီးရင် Double click
မနှိပ်လိုက်ပါနှင့်။ Virus ပါလာတယ်ဆိုရင် ချက်ချင်းကူးနိုင်ပါသည်။
Antivirus Software နှင့် Scan အရင်စစ်ကြည့်ပါ။ Antivirus Software
မရှိဘူးဆိုရင် Drive ကို Right Click နှိပ်ကြည့်ပါ။ Open
ကထိပ်ဆုံးရောက်နေရင် Memory Stick ထဲမှာ Virus ၀င်နေပါတယ်။ Antinivirus
Software တစ်ခုခုတင်ပြီးတော့ Scan လုပ်ကိုလုပ်ရပါတော့မည်။
မိမိ computer ကို virus မကိုက်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ
Removal Devices များမှ Virus များ Computer အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ပုံမှာ
ကွန်ပြူတာလေးအား Virus ၀င်ရောက်မှု အန္တယ်မှ ရာနှုံး
ဦးစွာ အားဖြင့် စကားခံရန်ရှိသည်မှာ ကျွန်တော်သည် Microsoft Platform ဖြစ်သော Microsoft Window XP အားဦးတည် အဓိက ထား၍ရေးသားပါသည်။
Window Xp တွင် ပါ၀င်သော Media Presentation Feature တစ်ခုဖြစ်သော
Autoplay Feature သည် Virus ရေးသားသော သူများအတွက်အဓိက
Autoplay ၏အလုပ်လုပ် ပုံမှာ စကားလုံး
အဓိပါယ်အရပင် အလိုအလျောက် အလုပ်လုပ် ခြင်းဟုအကြမ်းဖြင်းအားဖြင့်
ဖွင့်ဆိုလျှင် သူဟာ ဥပမာအားဖြင့်
Cd တစ်ခွေ Autoplay ဖို့ရာ အခွေကတော့
Drive ထဲကိုသူ့ဘာသာသူပျံပြီးဝင်သွားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး... အဲဒါဆိုရင်
အဖြေကတော့ ကျွန်တော်တို့ Drive
ကို Open လုပ်ပြီး အခွေကို ထည့် .. Drive ကို Close လုပ်လိုက် တာနဲ့ Autoplay က စတင် အသက်ဝင်ပါတယ်။
Usb Thumb Drive တစ်ခုအလုပ်လုပ်ပုံကလည်းထို့နည်းတူပဲပေ့ါ... Usb Port မှာ Attach လုပ်လိုက်တာနဲ့ စတင်အလုပ်လုပ်ပြီပေ့ါ..
ဟုတ်ပါပြီ ကျွန်တော်တို့ Autoplay ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာကို ဆက်ပြောကြည့်ပါမယ်.
Xp မှာဆိုရင် .. Media တစ်ခုကို Attach လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင် အရင် ဆုံး(
Hardware အချင်းချင်းဆက်သွယ်မှူ ..Firmware
File တွေ Folder တွေရဲ့ Capacity အတွက် ရယ် Freespace အတွက်ရယ် Information ပြသဖို့အတွက် Drive ကို Overall Scan လုပ်ပါတယ် ..
all Scan လုပ်ရင်းနဲ့ Autoplay.inf ရယ် Autoplay.ini (စတဲ့ System အညွန်း
File) တွေကိုတွေ့ရင် File ထဲကိုဝင်ဖတ်ပါတယ် အထဲပါတဲ့ Instruction အတိုင်း
အရင်ဆုံး ဒီလို ကြေညာပါတယ်
ဒါက Optional declare ဖြစ်ပါတယ်..
အောက်မှာ တော့ Command Line တွေပါလာပါမယ်
High Level Language လိုပါပဲ အလွန်နားလည်လွယ်တဲ့ စကားလုံးလေးသုံးထားကြတာပါ...
Open= something.exe (Drive ကို Attach လုပ်လိုက်တာနဲ့ စတင်အလုပ်လုပ်စေလိုတဲ့ Program ကိုညွန်းဆိုပါတယ်)
သဘောကတော့ ကျွန်တော်တို့ Drive ကို Attach လုပ်လိုက်တာနဲ့ ဒီ Program လေးက စတင်အလုပ်လုပ်ပါပြီ..
Virus ဆိုရင်တော့ ကိုက်သွားပြီပေ့ါဗျာ...
အဲဒီတော့ အဲဒါကို ကာကွယ်ရမှာ ဒီလိုပါ..
Run Box ထဲမှာ (Start Menu>>Run )
Gpedit.msc လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ..
အဲဒီက ဘယ်ဘက် Panel ထဲမှာ.. ComputerConfiguration ရယ် UserConfiguration ရယ် နှစ်ခုရှိပါတယ်..
နှစ်ခုလုံးထဲမှာ ၀င်ရှာပြီး Autoplay ကို ပိတ်ရပါမယ်
Admistrative Tamplate>>System ထဲမှာ TurnoffAutoplay ဆိုတာရှိပါတယ်..
အဲဒါကို Enable ပေးပြီး All Drive ကို ရွေးချယ်ပါ..
ရပါပြီ. သူ့ဘာသာသူ Autoplay တာကိုတော့ ပိတ်နိုင်သွားပါပြီ..
နောက်ထပ် Autoplay နိုင်တာတစ်ခုကတော့
ကျွန်တော်တို့ က Drive ထဲကိုဝင်မယ်ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ Autoplay မှာပါ..
ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးထားတာက Drive တစ်ခုကို Access လုပ်မယ်ဆိုရင် Double
Click ခေါက်တာတို့ Right Click ခေါက်ပြီး Explore တို့ Open
ဟုတ်ကဲ့ Autoplay ကအဲဒီအချိန်မှာလည်း အလုပ်ဝင်လုပ်ပါသေးတယ်
= Explore (Right Click ခေါက်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ပေါ်လာတဲ့ Menu မှ Option
ကို Explore လို့ရေးလိုက်တာပါ တခြားစာရေးရင် Explore ပျောက်သွားပါမယ်)
Shell\_explore\_Command = virus.exe (Explore ကို Choice လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် Run ပေးရမယ့် Program ကို Override လုပ်လိုက်တာပါ..)
မှာ Window Explore ကို ခေါ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် .. Override လုပ်လိုက်တဲ့
အချိန်မှာတော့ နောက်ဆုံးခိုင်းတဲ့ အမိန့်က အတည်ဖြစ်ပါတယ်.။
Drive တစ်ခုကို R Click ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင် ပေါ်လာတဲ့ Menu ထဲက အပေါ်ဆုံး
(သို့) Bold Letter နဲ့ရေးထားတဲ့ Command က Default Action ဖြစ်တဲ့ အတွက်
Double Click ခေါက်တဲ့ အချိန်မှာ အဲဒီ Command ကအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
အဲဒါကိုကာကွယ်ဖို့နည်းလမ်း အကောင်းဆုံးကတော့ Double CLick မခေါက်ပါနဲ့ RightClick ကနေ ကလည်းမဝင်ပါနဲ့လို့ပဲပြောစရာရှိပါတော့တယ်..
ဘယ်လိုဝင်မလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းမှာ အကောင်းဆုံးလို့ယူဆထားရတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုက တော့ MyComputer ကိုဖွင့်ပါ..
View Menu မှာ Explore ကို Folder လို့ Check ပေးလိုက်ရင် ဘယ်ဘက်မှာ TreeView Panel ပေါ်လာပါမယ်...အဲဒီကနေပဲ
Single Click နဲ့ Click ခေါက်ပြီး Access လုပ်ပါလို့ အကြံပြုပါတယ်..
နောက်တစ်ခုဖြည့်စွက်ပြောချင်တာက Folder Option ထဲကနေပြီး Hide Extension For Known File Type
ဆိုတာလေးကို uncheck လုပ်ထားလိုက်ပါ..
ခုတွေ့တွေ့နေရတဲ့ Virus အများစုက Dirve တစ်ခုထဲမှာ ရှိတဲ့ Folder တွေကို Hide လုပ်လိုက်တယ်..
ပြီးရင် သူ့ကိုယ်သူ Icon ကို Folder ပုံပေးလိုက်တယ်.. နာမည်ကိုလဲဖျောက်လိုက်တဲ့
File ရဲ့ Name အတိုင်းပေးလိုက်ပါတယ်
အဲဒီမှာ User က သူ့Folder ထင်ပြီး Double Click ခေါက်လိုက်တာနဲ့ Virus က ပြန်လည် အသက်ဝင်သွားပါတယ်
ဒါကြောင့် Folder View ကနေဝင်တာသည် သာ အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်
Folder View ထဲမှာ Folder တွေသာပြပါတယ် Folder ယောင်ဆောင်ထားတဲ့ Virus ဟာ File တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အတွက် Folder View ထဲမှာ မပေါ်ပါဘူး
အဲဒီတော့ Virus တစ်ခါ၀င်ပြီ်းတိုင်းမှာ
Search ကနေ ဒီလိုရှာပါ..
All file and Folder ကိုရှာမယ်လို့ရွေးချယ်ပါ..
ပြီးရင် အပေါ်က The Name of the file that you want to search .မှာ *.exe
Folder ပုံစံ နဲ့နောက်မှာ .exe ကိုတွေ့ရင် ဖျက်ပစ်ပါ..
Original Folder တွေကတော့ Hidden ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့ အတွက် Folder Option ကိုပြန်ခေါ်ပြီး
Show Hidden Folder ကို Check လုပ်ပါ
Hide Operating File ဘာညာ ကို Uncheck လုပ်ပါ
Original Folder တွေကိုပြန်တွေ့ပါလိမ့််မယ်
Hidden Attribute ကိုဖျောက်တဲ့ Command ကတေါ့
Attrib -s -h -r D:\_*.* /s /d
အဲဒီ Command မှာ D ကပြန်ဖေါ်ချင်တဲ့ File တွေ Folder တွေရှိတဲ့ Drive ရဲ့ Name ဖြစ်ပါတယ်..
Virus က အဓိက registry ကို ကိုင်တွယ်ပါတယ်..
ဒါကြောင့် registry ထဲက Autorun ပေးထားလို့ရတဲ့နေရာတွေကိုလေ့လာထားပါ..
Virus က အဲဒီနေရာတွေမှာ ၀င်ရေးချင်းအားဖြင့် Computer ဖွင့်တိုင်းမှာ သူတို့ ကို သူတို့ လန်းနေအောင်လုပ်ထားပါတယ်ပေ့ါဗျာ...
ဒါကြောင့် Virus သတ်ပြီးတိုင်းလဲ Registry ထဲမှာ သူတို့ရဲ့ Value တွေကို ပြန်ပြီး ဖျက်ပေးရပါမယ်။
credit:[You must be registered and logged in to see this link.] &[You must be registered and logged in to see this link.]
log out timer ကိုကြောက်လို့ပြန်မယ့်စာ အကုန်လုံးကို copy အရင်ကူးထားရသေးတယ်
22 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 3rd December 2009, 12:59 pm
ogre wrote: 10. ဘန်းကျော်ကြမယ်ဟေ ့
23 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 4th December 2009, 9:40 pm
ကောင်းပါတယ်ဗျာကျေိူးရှိတာလေးတွေတင်ပေးတဲ ့ညီအကိုတွေ ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
folder.exe virus က သင့် computer မှာ folder အကုန်လုံးကို exe ပြောင်းထားပါပြီးတဲ ့ဗျာ။
Antivirus program ကလေးကလည်းကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘာတွေဆက်လုပ်ကြမလည်းဗျာ။
folder.exe အပါအဝင် သူပွားထားတဲ့exe တွေကို folder တခုချင်းဆီဝင်ပြီတော့delete လုပ်ရမယ်ဆိုရင်မချောင်ဘူးဗျာ။ ဓီတော ့သက်သာအောင် နည်းလမ်းလေးတစ်ခုတော ့ပေးလိုက်မယ်ဗျာ။
Start=>Search=>All file & folder ကို click လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့box လေးထဲမှာ
*.exe ဆိုတာလေးကို type p တော့search ဆို တာလေးကို click လုပ်လိုက်ပါဗျာ။ ဟော
တွေ ့တယ်မလား။ exe file အကုန်လုံးထွက်လာပါပြီး။ အဲဒီမှာ folder ပုံတွေ ့တာကို delete သာလုပ်လိုက် ဗျာ။ မေးလိုက်တော ့ဗျာ ဒါလားကွ folder ပွားတဲ ့ကောင်။ နောက်ငါ ့စက်ထဲဝင် အုံးမလားဆိုပြီတော ့သာ delete လုပ်လိုက်ပါတော ့ဗျာ။ ( သားကသတ်ပါလို ့မပြောဘူးနော် ငရဲကြီးမှာဆိုးလို့delete ပဲလုပ်လို ့ပြောတာနော် )
24 Faster Your PC and Firefox on 18th January 2010, 8:40 pm
ဒီပိုစ်ကို သူငယ်ချင်း Mosquito Blogspot က တွေ့လို့ နည်းပညာဖြန့်ဝေပါတယ်
ကနက်သီရီသားလေး ဆိုတဲ့ ဘလော့မှာတွေ့လို့ မှတ်ထားတာလေးကိုမျှဝေလိုက်ပါတယ်.... တကယ် အသုံးဝင်တာလေးတွေပါ.. အမြဲ လုပ်သင့်ပါတယ်...။ မူလဘလော့ရဲ့ လင့်ကတော့ရှာမတွေ့တော့ပါဘူး... တောင်းပန်ပါတယ်..။
ပြီးရင် Adress bar မှာ about:config လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် အောက်မှာ box လေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
i will be careful,i promise ဆိုတာလေးကို click လိုက်ပါ။
ပြီးရင် အပေါ်ဆုံးမှာ Fliter ဆိုတာ ရှိတယ်။
အဲဒီထဲမှာ network.http.pipelining ကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။
အဲဒါဆိုရင် အောက်မှာ network.http.pipelining နဲ့ပက်သက်တာတွေ ကြလာပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီမှာ status/type/value ဆိုတဲ့ ရှိတယ်။
network.http.pipelining ရဲ့ value မှာ flase ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
အဲဒါလေးကို double click ထောက်လိုက်ပါ။ ture ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
သူအောက်မှာ network.http.pipelining.maxreguests ဆိုတာရှိတယ်။
အဲဒါရဲ့ value4ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
အဲဒါကို double click ထောက်ပြီး 100 လို့ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။
ပြီးတော့ အပေါ်ဆုံးက filter ထဲမှာ network.http.proxy.pipelining ကိုရိုက်ပြီး ရှာလိုက်ရင် အောက်မှာ
အဲဒီမှာလည်း flase ဖြစ်နေရင် true ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် firefox ကိုပြန်ပိတ်ပြီး ပြန်ပွင့်ကြည့်ကြည့်ပါ။ မြန်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
firefox ကို ဖွင့်လိုက်ပြီး Ctrl+Shift+H ကိုနိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးတော့ Libray ဆိုတဲ့ box လေးကျလာပါလိမ့်မယ်။
history ထဲမှာ ရှိတဲ့ဟာတွေကို ရှိတဲ့ဟာတွေ Ctrl+A ကိုနိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးတော့ right click ထောက်လိုက်ပါ။ ညာဘက်မှာ delete ဆိုတာကို နိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ နည်းနည်းတော့ ပေါ့လာပါလိမ့်မယ်။
(၁) Start Menu ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေဖို့
Start ကိုနှိပ်ပါ။ Run box ကိုဖွင့်ပါ။ Regedit လို့ရိုက်ပါ။ (Registry editor ကိုဆိုလိုတာပါ။)
ဘယ်ဘက် panel မှာ “HEYCURRENT USER” ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ အဲဒီထဲ ကမှ “control panel” ကို
ထပ်ရွေးပါ။ “Control panel” ထဲကမှ Desktop ကို ရွေးပါ။ ညာဘက်အကွက်မှာ ပေါ်လာတဲ့
“Menushowdelay” ကို Right click နှိပ်ပါ။ Modify ကိုရွေးပြီး Value ကို “0″ ထားပါ။ ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ Restart
25 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 18th January 2010, 8:40 pm
(၂) မလိုအပ်တ့ဲဖိုင်တွေကို ရှင်းပစ်ရင် ပိုမြန်ဆန် စေပါတယ်။
- Start ကိုသွားပါ။
- Run box ကိုဖွင့်ပါ။
- “gpedit.msc” ဆိုပြီး ရိုက်ပါ။
- ဘယ်ဘက် panel မှာ “computer configuration” ရွေးပါ။
- “administrative Templates” ကိုရွေပါ။
- “Windows components” ကို ရွေးချယ်ပါ။
- “Terminal services” ကိုရွေးချယ်ပါ။
- ညာဘက် panel မှာ ပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့ “Do not delete Temp Folder Upon exit” မှာ Right click နှိပ်ပါ။
- Properties ကို ရွေးချယ်ပါ။
- ပြီးရင် “disable” ကို ရွေးချယ်ပါ။ (ဆက်ဖတ်ရန်)
(၃) နောက်တစ်မျိုး ရှင်းနည်း ရှိပါသေးတယ်။
- Start ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
- Run box ကိုဖွင့်ပါ်။
- “% temp%” လို့ ရိုက်ထည့်ပါ။
- အဲဒီမှာ တွေ့သမျှ ဖိုင်တွေကို ‘Ctrl+a’ နဲ့ Select ပေးပြီး ဖျက်ထုတ်ပစ်ပါ။ (အချို့လုပ်ဆောင်နေဆဲ ဖိုင်တွေကိုတော့ ဖျက်လို့မရတဲ့ အ ကြောင်း ပြောလာတတ်ပါတယ်။)
(၄) နောက်တစ်မျိုး ရှင်းနည်း ရှိပါသေးတယ်။
- Start > Run box ကိုဖွင့်ပါ။
- “Prefetch” လို့ ရိုက်ထည့်ပါ။
- တွေ့သမျှ ဖိုင်မှန်သမျှ ဖျက်ပစ်ပါ။
(၅) Hard disk ကို အချိန်ရှိသရွေ့ရှင်းလင်းပေးပါ။
- all Program ကိုသွားပါ။
- accessories ကနေတစ်ဆင့် “System tools” အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ “Disk Clean Up” ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ ၅ မိနှစ်အ တွင်းမှာ ပုန်းကွယ်နေတဲ့ အ မှိုက်သရိုက်တွေ မှန်သမျှကို ရှင်းလင်းပေးပါလိမ့်မယ်။
(ကိုယ့်အနေနဲ့ အ ပြင်ကို ခဏတဖြုတ် သွားမယ့် အချိန်မျိုးတွေမှာ သိပ်အသုံးဝင်ပါတယ်။)
(၆) မသုံးတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေကို ဖယ်ထုတ်ပါ။
- “msconfig” လို့ရို်က်ပါ။
- “System configuration Utility” box ပေါ်လာပါမယ်။
- ညာဘက် အစွန်းဆုံးမှာ “Start up tab” ဆိုတာ ရှိပါတယ်။
- ကိုယ့်အတွက် အသုံးမဝင်တဲ့ program တွေရဲ့ရှေ့မှာ အ မှန်ခြစ် အမှတ်အသား လုပ်ထားခဲ့ရင် ပြန်ပြီး
- Restart နဲ့ ပြန်စပါ။
(၇) လုံခြုံစေဖို့ ဖိုင်စနှစ် ပြောင်းသုံးပါ။
- Start > all programs > accessories > command prompt တစ်ခုချင်း ကလစ်နှိပ်ပြီး သွားပါ။
- Command pormpt ပေါ်လာရင် အနက် screen ကြီးကို တွေ့ရပါမယ်။
- မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် cursor လေးနဲ့ “convert c:fs:ntfs” လို့ရိုက်ပါ။
- ပြီးရင် ‘Enter’ ခေါက်ပါ။
- Command prompt ကို နောက် တစ်မျိုး “Start > Run” မှာ cmd လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး သွားနိုင်ပါတယ်။
- တကယ်လို့ NTFS ပြောင်းပြီးသား ဆိုရင် ပြောင်းဖို့ မလိုပါ။ My computer ကို Right Click နှိ်ပ်ပြီး
“properties” မှာဖွင့်ကြည့် နိုင်ပါတယ်။
- cmd ထဲဝင်ပြီး ပြန်ထွက်မရ ဖြစ်နေရင် “exit” လို့ရိုက်ပြီး ထွက်ပါ။
26 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 18th January 2010, 8:41 pm
(၈) Memory ပိုမို အလုပ်လုပ်စေနိုင်ဖို့
- XP ရ့ဲdefault မှာ memory ရေရှည် အသုံးခံနိုင်အောင်နဲ့့ တခြား လိုအပ်တဲ့ စနစ်ပိုင်း ဆိုင်ရာတွေကို
မောင်းနှင်ဖို့ စီမံထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတလေမှာ ကိုယ့်အတွက် အသုံးမဝင်ပါဘူး။ ရှိရင်းစွဲ memory ကိုပဲ လှည့်ကွက်တစ်ခု အနေနဲ့ ပိုပြီး ကောင်းမွန်အောင် သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
- Start > Run > Regedit အ ဆင့်ဆင့်သွားပါ။
- Registry panel ရဲ့ ဘယ်ဘက်မှာ “HKEYLOCaLMaCHINE” ကို click နှိပ်ပါ။
- “System” ကို ကလစ် နှိပ်ပါ။
- “Current control set” ကို ကလစ် နှိပ်ပါ။
- “control” ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
- “Session Manager” ကို နှိပ်ပါ။
- “Memory Managment” ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ညာဘက် panel မှာ ရှိတဲ့ “Disable pasing executive” ကို Double Click နဲ့ ဖွင့်ပါ။
- Large System Cache ကိုလည်း double click နဲ့ ဖွင့်ပါ။
- Decimal value ကို “1″ ပြောင်းပေးပါ။
- Restart ပြန်လုပ်ပါ။ Memory Performance ပိုပြီး ကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ်။
(၉) ဖိုင်တွေကိုလုံခြုံစေဖိို့ password ပေးပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ဖိုင်တွေ၊ folder တွေ၊ ebook စတာတွေကို လုံခြံုစေဖို့ နည်းလမ်းအမြောက်အမြား ရှိပါတယ်။
password ပေးပြီး သိမ်းဆည်းထားတာဟာ အလုံခြံုဆုံးပါပဲ။
အဲဒီလို password ပေးတဲ့အခါမှာ သိမ်းဆည်းချင်တဲ့ ဖိုင်တွေကို folder တစ်ခုထဲကို အရင်ထည့်ပါ။ ပြီးရင်ကိုယ်မှတ်မိတဲ့ Name ပြောင်းပါ။
ပြီးရင် Windows ရဲ့ built-in zip format ကို password ပေးပါ။
- Zip Software ကို install လုပ်ပြီး သုံးစွဲတာက ပိုကောင်းပါတယ်။
- Win Zip Software ကို ဖွင့်ပါ။
- File menu အောက်မှာရှိတဲ့ addapassword ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
Winrar Software ကို install လုပ် ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့
- ဖိုင်ကိုကလစ်ထောက်လိုက်ပြီး ချံု့ပေးပါ…လို့ ခိုင်းပါ။
- advanced မှာ “Set password” ကို click နှိပ်ပါ။
- Password line နှစ်ကြောင်း တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု တူညီရပါမယ်။
(၁၀) ဖိုင်တွေ လုံခြံုစေဖို့ ရုပ်ဖျက်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုထားတဲ့ ဖိုင်မှန်သမျှဟာ အဲဒီဆော့ဖ်ဝဲရဲ့ extension နဲ့ အဆုံးသတ်ပါတယ်။
ဥပမာ ebook စာအုပ်တွေဆိုရင် (.pdf)၊ စာစီစာရိုက် ဆော့ဖဲဝဲ pagemaker ဆိုရင် (.pmd)၊ Photoshop ဆိုရင် (.psd) (.jpg) စတ့ဲအ ဆုံးသတ် extension တွေပါ၀င်ပါတယ်။
အဲဒီ extension တွေကို ဖော်ထားလို့ ရသလို ဖျောက်ထားလို့လည်းရပါတယ်။
- ပထမဆုံး My Computer ကိုကလစ်နှိပ်ပြီး အထဲကို ၀င်ပါ။
- Folder options ကို သွားပါ။ (Tools အောက်မှာ ရှိပါတယ်။)
အဲဒီက “File Types” ကို ကလစ် နှိပ်ပါ။ (အဲဒိအခါမှာ ဖိုင်ရဲ့ extension တွေ တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
- အခု ဖုံးကွယ်ထားမယ့် ဖိုင်တစ်ခုကို extension ပြောင်းပေးပါ။ ဥပမာကိုယ်က (.pmd)နဲ့စာရိုက်ထားတဲ့ page တစ်ခုကို ဖျောက်ထားချင်ရင် အဲဒီ (.pmd) နေရာမှာ (.pdf) စသည်ဖြင့် ပြောင်းလဲပေးလိုက်ပါ။
- ပြီးရင် extension ဖော်ထုတ်ထားတာကို ပြန်ပြီး ဖျောက်ပစ်လိုက်ပါ။
- အ ဒီအခါမှာ ကိုယ့်ဖိုင်ဟာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင်မှ မမှတ်မိ နိုင်တော့တဲ့ ဖိုင်အမျိုးအစားတစ်ခုအနေနဲ့ ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။
27 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 18th January 2010, 8:41 pm
(၁၁) ပရိုဂရမ်ရဲ့ အမြန်နှုန်းတွေကို မြှင့်တင်ပါ်။
Screen ရဲ့ အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ ‘taskbar’ ကို Right click လုပ်ပါ။
- ပေါ်လာတဲ့ box ထဲက ‘Task Manager’ ရွေးပါ။
- ‘Task Manager’ ထဲကမှ ‘process tab’ ကို ရွေးချယ်ပါ။ ကိုယ့် ပီစီထဲမှာ ရှိတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေ၊ browser တွေ
- ကိုယ် မကြာခဏ သုံးစွဲလေ့ရှိတဲ့ ပရိုဂရမ်ပေါ်မှာ “Right Click” နှိပ်ပါ။
- ‘pirority’ ကို High လုပ်လိုက်ပါ။
- ကိုယ်သုံးစွဲတဲ့ ပရိုဂရမ်ဟာ သိသိသာသာ အမြန်နှုန်း မြင့်တက်လာပါလိမ့်မယ်။
(၁၂) Hibernate မလုပ်ပါနဲ့။
Hibernate ကို ကွန်ပျူတာ သမားတွေ အသိများပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့မှာ ကိုယ်သုံးစွဲထားခဲ့တဲ့ ပရိုဂရမ်တွေအတိုင်း ပြန်ပေါ်ထွက်လာအောင် စီစဉ်ပေးထားတာပါ။
ဒါပေမယ့် memory ကို အရမ်းစားပြီး hard disk မှာလည်း မတရား နေရာယူလွန်းပါတယ်။
- Control Panel ကိုဖွင့်ပါ။
- Power Options ကို click နှိပ်ပါ။
- Hibernate ကို ရွေးချယ်ပါ။
- ‘Enable hibernation’ ကို ‘Uncheek’ ပြန်လုပ်ပါ။ (ခွင့်မပြုဘူး ဆိုတဲ့ သဘောပါ။)
(၁၃) Memory နည်းပါးနေတဲ့ ပြဿနာ
အမြဲလို ကြုံရဘူးပါတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲ နှစ်ခုလောက်ပြိုင်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ‘Memory Inerupt’ ဆိုပြီး ဆော့ဖ်ဝဲ တစ်ကို ပိတ်သွားတာမျိုး ရှိသူတွေအတွက် လျှော့ချသင့်တဲ့ ပုံစံတွေ ရှိပါတယ်။
XP မှာ အသစ်ပေါင်းထည့်ထားတဲ့ feature အသစ်ဟာ momery ကို အလွန ်သုံးစဲသွ လို “Themes” တွေကလည်း memory ကို သုံးစွဲပါတယ်။
ဒါကြောင့် Style XP လို “Themes” တွေကို memory မြင့်မြင့်မားမား မရှိဘဲနဲ့ install မလုပ်ပါနဲ့
Window ရဲ့ ဂန္တဝင် ပုံစံဟာ memory ကို ချွေတာရာရောက်ပြီး အလုပ် များများရှိတဲ့ လူတွေအဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။
- advanced tab ရွေးချယ်ပါ။
- ‘Performance’ မှာ ’setting’ ဆိုတာ ပါ၀င်ပါတယ်။ အဲဒီ setting ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး ‘adjust for best performance’ ကို ရွေးချယ်ပါ။
နောက်တစ်နည်းနဲ့ Start Menu ကို ဂန္တဝင် ပုံစံပြောင်းလို့ ရသေးပေမယ့် အခုနည်းက OS ကနေ
အ လိုအ လျှေက် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ အ တွက် ကောင်းပါတယ်။
(၁၄) automatic update ကို ပိတ်သင့်ပါသလား။
အ င်တာနက် ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ပီစီတွေ အ ဖို့တော့ automatic update ကို ပိတ်ထားတာဟာ အ ဆိုးရော
အ ကောင်းရော ဖြစ်စေပါတယ်။ အ ဆိုးကတော့ browser မှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ ‘add-ons’ လို update တေ
ွမရနိုင် တော့ပါ။aကောင်းဘက် ကတော့ memory ကို ပိုမို များပြားစွာ သုံးစွဲစေပြီး XP ကို ပိုမြန်စေပါတယ်။
- automatic updating ကို Turn Off လုပ်ပေးပါ။
(၁၅) ပရိုဂရမ်တွေကို Shortcuts တွေ တည်ဆောက်ထားပါ။
- Desktop မှာ New Floder ဖန်တီးပြီး ‘application’ လို့ အ မည်ပေးပါ။
- ပြီးရင် ပရိုဂရမ် တွေရဲ့ Shortcuts တွေ မှန်သမျှ ထည့်ပေးပါ။
- Taskbar မှာ Right Click နှိပ်ပြီး toolbar မှာ ‘New toolbar’ ကို သွားပါ။
- အ ခုန တည်ဆောက်ထားတဲ့ ‘application’(New Floder)’ ဆီကို ညွှန်းပေးပါ။
- ပီစီဖွင့်တိုင်းမှာ Shortcuts တွေကနေ တစ်ဆင့် အ မြန်ဆုံး အ လုပ်လုပ်နိုင်ပါမယ်။
(၁၆) ‘Shut-down’ shortcut ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
- Desktop မှာ Right Click နှိ်ပ်ပါ။ New shotcut ကို ဖန်တီးပါ။
- နာမည်မှာ ’shutdown-s-to’ လို့ အ မည်ပေးပါ။
- ပြီးရင် properties ကို သွားပါ။ Target နေရာမှာ “C:/Windows/system32/shutdown.exe”ကို ရွေးပေးပါ။
(XP.SP2 သမားတွေအ တွက်တော့ အ လွယ်တကူနဲ့ C > Windows > System32 > “shutdown icon” အ ထိ
သွားပြီး shutcut ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။)
28 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 18th January 2010, 8:42 pm
(၁၇) Keyboard shotcut တွေကိုသုံးပါ။
Ctrl+a ဆိုတာ Select all ၊ Ctrl+C ဆိုတာ Copy ၊ Ctrl+V ဆိုတာ Pasteဒီလိိုမျိုး မြန်ဆန်စေတဲ့
ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်း နည်းလေးတွေကို သုံးစွဲကြည့် နိုင်ပါတယ်။
(၁၈) Fonts တွေကို ခဏ ဖယ်ထုတ်ထားပါ။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ တချို့Fonts တွေဟာ Uပမာအားဖြင့် ကိုယ်ဟာ စာစီစာရိုက် သမားတစ်ယောက်၊ Web
designer တစ်ယောက်မဟုတ်ရင် မလိုအပ်တဲ့ font တွေကို အပြီးတိုင် ဖယ်ထုတ်ထားလို့ ရပါတယ်။
Photoshop လို ပရိုဂရမ်မျိုးဟာ ဖွင့်ချိန် အရမ်းကြာမြင့်တာဟာ သူ့ရ့ဲlibrary ထဲကို အသင့်သုံးပစ္စည်းတွေကို
ခေါ်ယူနေတာကြောင့်ပါ။ အဲဒီ လိုမျိုးပဲ တခြားပရိုဂရမ်တွေဟာ ကြာနေတတ်တာဟာလည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုး
ရှိနိုင်ပြီင်္း အဒီထဲက အကြောင်းတစ်ခုက ‘Fonts’ တွေကို loading လုပ်နေရလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
- Control Panel > Fonts ကို ဖွင့်ပါ။
- Folder အသစ်တစ်ခု ဆောက်ပါ။ အသုံးမလိုတဲ့ Fonts တွေကို သီးသန့် ပေါင်း စုထားပြီး၊ control panel
ကနေ ခွဲထုတ်နေရာ ရွှေ့ပစ်လိုက်ပါ။
- ဒါဟာ ပရိုဂရမ်တွေကို မြန်ဆန်စေတဲ့ လျှို ့ဝှက်ချက် တစ်ခုပါပဲ။
(၁၉) Font အရွယ်အစား ပြောင်းလဲ ကြည့်နိုင်ရန်
အင်တာနက် သုံးစွဲ နေတဲ့ အချိန်မှုာ Image ပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ စာလုံးတွေကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် တခြားနေရာ မျိုးစုံက
အက္ခရာတွေကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပိုမိုသဲကွဲစွာ မြင်နိုင်ဖို့ နည်းရှိပါတယ်။
- Ctrl ကို ဖိထားရင်း keyboard အပေါ်တန်းက “+” ကို နှိပ်ပါ။ နှိပ်လေလေ font နဲ့ webpage စာမျက်နှာ
ကြီးလာလေလေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အရွယ်အစား လျှော့ချဖို့ ကတော့ ‘Ctrl’ နဲ့ အနှုတ်လက္ခဏာကို
(၂၀) Shift + Delete ကို သတိထားပါ။
ရိုးရိုး Delete ဟာ ဖိုင်တစ်ခုကို ဖျက်ပစ်လိုက်ပေမယ့် အမှိုက်ပုံးထဲမှာ ကိုယ်စားကျန်ပါသေးတယ်။ Shift Key
ကို သတိထားပြီး Delete ခလုတ်ကို နှိပ်ချလိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ အပြီးတိုင် ဖျက်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ မလိုလား
အပ်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်စေနိုင်တာမို့ ‘Shift + Del’ ကို သတိထားပြီး သုံးစွဲပါ။
(၂၁) Error report ကို ပယ်ဖျက်ပါ။
ပရိုဂရမ်တွေ မျိုးစုံ ဖွင့်နေရင်း တစ်ခါတစ်လေမှာ ပရိုဂရမ် တစ်ခုခုဟာ ကြာမြင့်နေတဲ့ အချိန်မှာ hang
မသွားခင်မှာ windows ရဲ့ ‘Error report’ box တက်လာတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကို ဖျောက်ထားပစ်ပါ။
- ပြီးရင် advanced ကို click နှိပ်ပါ။အ ဲဒီထဲကမှ ‘Error Reporting’ Disable ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး OK နဲ့ ထွက်ပါ။
ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ အတွက်ဆိုရင် ‘Open-with’ ဟာ အလွန်အ သုံးဝင်ပါတယ်။ window media player ကို
လက်မခံတ့ဲfile extension တွေကို open-with နဲ့ ဖွင့်လှစ်ရပါမယ်။ (အ ရင်ဆုံး player တချို ့ကိုတော့ install
- ဖွင့်ချင်တဲ့ ဖိုင်တစ်ခုက်ို ‘Right Click’ ထောက်ပြီး ‘open with’ ကို ရွေးချယ်ပါ။
- ‘Browser’ လုပ်လိုက်ရင် ပရိုဂရမ်တွေ အစီအ ရီ ပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ကြိုက်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီး
ဖွင့်လှစ် နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမျှ ဖွင့်ကြည့်လို့ မရဘူးထင်တဲ့ Note pad ပုံစံ ပရိုဂရမ်တွေကို word pad နဲ့့
(၂၃) Open-with ဟာ ပိုပြီး မြန်ဆန်ပါတယ်။
Photoshop မှာ (.psd) ဆိုတဲ့ ပရိုဂရမ်ပိုင် extension တွေက လွှဲလို့ တခြားပုံရိပ်တွေကို ဖွင့်ကြည့်ချင်ရင်
‘open-with’ က ပိုပြီးမြန်ဆန်ပါတယ်။
Open-with ကနေ ‘Image Viewer’ ကို ရွေးချယ်ပေးပါ။
(၂၄) Filmstrip နဲ့ ရုပ်ရှင် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်မှာရှိတ့ဲပုံရိပ်တွေ အားလုံးကို floder ထဲမှာ တစ်စု တစ်စည်းတည်း ထားလိုက်ပါ။ ဓါတ်ပုံတွေ အားလုံးကို
ရုပ်ရှင် တစ်ခုကို ကြည့်နေရသလိုမျိုး စီ်ထားနိုင်ပါတယ်။
- Floder ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
- ပြီးရင် Menu bar ထဲက ‘View’ မှာ Filmstrip ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။
- Ctrl Key ကို ကိုင်ထားပြီး လိုအပ်သလို အကွက်ရွှေ ့လို့ ရပါတယ်။
29 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 18th January 2010, 8:43 pm
(၂၅) IE ရဲ့ homepage ကို Blank လုပ်ထားပါ။
IE ကို ဖွင့်ရာမှာ တစ်ခါတလေ စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ် ရဲ့ default home page
“msn.com” ဟာ ငြီးငွေ့စရာ ကောင်းလောက်အောင်ကို ကြာမြင့်လွန်း တတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ IE ကို
ဖွင့်လိုက်တိုင်းမှာ အဖြူထည် စာမျက်နှာ ဖြစ်နေတာဟာ ပိုပြီး မြန်ဆန် စေပါတယ်။
- IE ကို ဖွင့်ပါ။
- Tools ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ General အောက်မှာ ရှိတဲ့ address box မှာ user blank ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
- apply ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ OK ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
(၂၆) Domain တွေကို key နဲ့ သုံးပါ။
- [You must be registered and logged in to see this link.] google.com ကို သွားဖို့ အ တွက် အ ရှည်ကြီး ရိုက်နေဖို့ မလိုပါဘူး။
- google ကို ရိုက်ပါ။ ပြီးရင် Ctrl key ကု်ိင်ထားပြီး Enter ခေါက်ပါ။ အ ဲဒီလို short-cuts တွေကို လေ့လာရင်း
သုံးစွဲရင် ပိုမြန်ဆန် စေပါတယ်။
(၂၇) ‘animated dog’ ဟာ လေးလံပါတယ်။ ပယ်ဖျက်ထားပါ။
Search box ဟာ အ လွန်နှေးပါတယ်။ စက်ကို crash ဖြစ်သွား စေမတတ် ပါဘဲ။ အ ဲဒီ ခွေးကလေးကို
- Search window ကို ဖွင့်ပါ။
- Change preferences ကို click လုပ်ပါ။
- ‘Without an animated screen character’ ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
- animated object မရှိတော့တဲ့ အတွက် Search box ဟာ ပိုပြီး မြန်ဆန် လာပါလိမ့်မယ်။
(၂၈) Network အ တွင်းလေ့လာ ကြည့်ခြင်း
ကိုယ့်ရဲ့ network Eရိယာ များမှာ ဘယ်သူတွေ ရှိနေသလဲ ဆိုတာ ကြည့်ရှုချင်ရင် My Network places ကနေ
ကြည့်ရှုလို့ ရပါတယ်။ ပီစီတစ်လုံးကနေ နောက်တစ်လုံး ဆီကို access လုပ်ဖို့ ကို တော့ admin ခွင့်ပြုချက်
ဒါမှမဟုတ် password ရယူရပါမယ်။ My Network places မှာ ‘view word group computer’ ကိုရွေးလို်က်။
အဆက်အသွယ် တွေ အကုန်လုံးကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
(၂၉) MP3 သီချင်းတွေကို ကလစ်တစ်ချက်တည်းနဲ့ ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
- Control panel > Taslbar and Start Menu ကို ရွေးချယ်ပါ။
- Start Menu ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
- Customize ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
- advanced tab ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
- My Music ကို ရွေးချယ်ပါ။
(၃၀) Print Screen သို့မဟုတ် Capture ဖမ်းယူခြင်း
ကွန်ပျူတာပေါ်က မြင်းကွင်းတစ်ခုခုကို ပုံရိပ်အ နေနဲ့့ ကူးယူပြီး ကိုယ့်အ တွက် ပြန်လည်၍ အ သုံးချနိုင်ပါတယ်။
- လိုချင်တဲ့ image ဒါမှမဟုတ် webpage ကို ဖွင့်ပါ။
- Keyboard က ‘print screen preview’ ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ (ဖွင့်ထားတဲ့ ပုံရိပ် အ နည်းငယ်သာ လိုချင်ရင် alt
- ပြီးရင် Start > Run box မှာ ‘mspaint’ဆိုပြီး စာရိုက်ပါ။ (ရိုးရိုး paint program ကို ခေါ်သုံးရင်လည်း
- paint ပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ ‘Ctrl+V’ ဒါမှမဟုတ် ‘File menu’ အေ ာက်က ‘paste’ ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ (ဤ paint
နေရာမှာ အ ခြား Clipboard ရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံ တည်းဖြတ် ဆော့ဖ်ဝဲ တွေ photoshop corel draw စတာတွေ သုံးစွဲ
(၃၁) Screen Saver ကို Slide Show လုပ်နိုင်ပါတယ်။
- Display properies box ကျလာရင် ’screen saver tab’ ကို ရွေးချယ်ပါ။
- နောက်ဆိုရင် Screen Saver ဟာ ရုပ်ရှင်တွေ ပြသလိုမျိုး ပုံရိပ်တွေ တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး မရိုးနိူင်အေ ာင်
- (My Picture folder ထဲမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Image တွေကို အ ရင်ဆုံးထည့်ထားရပါမယ်။ Slide Show မှာ
ပုံရိပ်တစ်ခု န့ဲတစ်ခုအ ကြား ကြာမြင့်ချိန်ကို် စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ်။)
(၃၂) Pop-up တွေကို လက်မခံပါနဲ့။
Firefox browser မှာ pop-up blocker ဆိုပြီး လုံခြုံရေး tool ပါ၀င်တဲ့ အ ပြင် add-ons တွေနဲ့ အ ထူး ပိတ်ပင်
တားဆီးလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ IE ရဲ့နောက်ဆုံးထွက် version7.0 ကို install လုပ်လိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ pop-up
ပြဿနာဟာ ရ၀% လျှော့ကျ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် browser မှန်သမျှရဲ့ နောက်ဆုံးထုတ် version
ကို ရအေ ာင် ယူထားပါ။
(၃၃) Toolbar ပြုပြင်ခြင်း
- firefox မှာ Menubar ပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပါ။
- အ ဲဒီထဲက ပေါ်လာတဲ့ customize bar ထဲကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ‘icon’ တွေကို ပေါင်းထည့် ပေးပါ။
IE အ တွက်ကတော့
- အဲဒီအထဲကမှ စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပြင်ဆင် ထားတဲ့အတွက် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အချိန်မှာ
လိုသလို အသုံးချနိုင်တဲ့ icon တွေ အဆင်သင့် မြန်မြန် ဆန်ဆန် ရှိနေမှာပါ။
30 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 18th January 2010, 8:44 pm
(၃၄) Private data ကို လုံခြုံအောင်ထားပါ။
- IE ကိုဖွင့်ပါ။ Tools Menu မှာ ရှိတဲံ့ internet options ကနေ Clear History ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ ‘Cache’
ကိုရှင်းပါ။ ပိုပြီး အန္တရာယ် ကင်းစေချင်ရင် ‘Cookies’ တွေကို ရှင်းပါ။
Firefox ကို ဖွင့်ပါ။ “Options” ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
- Privacy ကို ကလစ်နှိပ်တဲ့အခါမှာ box ရဲ့ အောက်ဆုံးမှာ “private data” တွေ့ရပါမယ်။ “Setting” ကို ၀င်ပြီး
အမှန်ခြစ်တွေ ပေးထားပါ။ OK နှိပ်ပြီး ပြန်ထွက်ပါ။ “always Clear my private data when I close firefox”
ရှေ ့မှာ အ မှန်ခြစ်ပေးပါ။ Cyber cafe မှာ သုံးစွဲဖို့ သင့်တော်စေတ့ဲtool တစ်ခုပါ။
(၃၅) Entry တွေကို ရှင်းလင်းပါ။
- Regedit လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။
- HKEY_LOCaL_MaCHINE ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
- Software ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
- Microsoft ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
- Windows ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
- Current Version ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
- Uninstall ဆိုပြီးပေါ်လာပါမယ်။အ ဲဒီထဲမှာ ကိုယ် uninstall လုပ်စU်တုန်းက အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့်
မပျက်ခ့တဲ ့ဲ ဆော့ဖ်ဝဲ အကြွင်းအကျန်နဲ့ အစအန တွေကို ရှင်းလင်း ထုတ်ပါ။
- Restart ပြန်လုပ်ပါ။
(၃၆) Mouse ကို ချောမွေ ့စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့် Mouse ရဲ့ default ဆက်တင်ဟာ ပြုပြင်စရာ မလိုအောင် ကောင်းပါတယ်။ တကယ်လို့
စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ချင်သေးတယ် ဆိုရင်–
- Hardware ကို ရွေးချယ်ပါ။
- Device Manager ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
- ‘Mice and other pointing serices ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ mouse ကို right click နှိပ်ပြီး properties
ကို စိတ်ကြိုက် ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ်။
(၃၇) Restore point ကို ဖျက်ပစ်ပါ။
ကနွ ်ပျူတာရ့ဲစနစ်မုှာ တစ်ခုခု အမှားအယွင်း ဖြစ်နေခဲ့ရင် အရင်အတိုင်း အခြေအနေ ကောင်းလေးကို ပြန်လည်
ရရှိစေနိုင်ဖို့ System Restore ဆိုတာ ထားရှိပါတယ်။ Memory ကိုရော၊ Hard disk နေရာလွတ်
များများကိုရော လိုချင်တယ် ဆိုရင်အရင် restore point အဟောင်းတေကွ ို ဖျက်ပစ်ရပါမယ်။
- Start > all Programs > accessories > System tools > Disk Clean up > More Options အ ထိ
- အ ဲဒီ More Options မှာရှိတဲ့ restore point အ ဟောင်းတွေကို delete လုပ်ပစ်ပေးပါ။
(၃၈) တစ်ပတ်တစ်ခါ defragment လုပ်ပါ။
- Start > all Programs > accessories > System tools >Disk Defragmenter ကို ရွေးချယ်ပါ။
- analyzing လုပ်တာနဲ့ Defragment လုပ်တာ နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ နာရီဝက်၊ တစ်နာရီလောက် အချိန်
ပေးရပါမယ်။ ဒီ tool ဟာ window နဲ့ ‘built-in’ tool ဖြစ်ပြီး System မှာရှိတဲ့ မလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေနဲ့ အမှိုုက်
အစအန တွေကို အထိုက်အလျှောက် ဖယ်ရှား ပေးတဲ့အတွက် သုံးစွဲ သင့်ပါတယ်။
(၃၉) ‘Virtual memory’ တည်ဆောက်ခြင်းဟာလည်း စနစ်ကို မြန်ဆန်စေပါတယ်။
ပီစီရ့ဲလိုအပ်တဲ့ ပရိုဂရမ်တွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် သုံးစွဲနိုင်စေဖို့ ‘Virtual memory’ တည်ဆောက် နိုင်ပါတယ်။
- My Computer ကို Right Click နှိပ်ပြီး properties ကို ရွေးချယ်ပါ။
- ကျလာတ့ဲbox ထဲမှာ advanced ကို ထပ်မံ ရွေပေးပါ။
- ‘Performance’ မှာရှိတဲ့ ‘Settings’ ကိုရွေးချယ်ပါ။
- Change icon ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
- ပြီးရင် “customize” box ကို ‘on’ ပြီးတဲ့ အခါမှာ C.D.E ရှိတဲ့ drive တစ်ခုချင်း စီကို လိုသလောက် virtual
memory ထပ်မံ တိုးဖြည့်ပေးထားလို့ ရပါတယ်။ ပြီးရင် set command ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး OK နဲ့ ထွက်ပါ။
(၄၀) မြန်မြန်ဆန်ဆန် Lock လုပ်နည်း
‘Ctrl + alt + Del’ ကို တွဲဖက်နှိပ်ရင် ‘Task Manger’ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအထဲကမှ “Log-Off” ကို
ရွေးချယ်ပြီး အမြန် Lock လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီထက် ကောင်းတဲ့ နည်းကတော့-
- Kkeyboard က windows Logo Key လေးကို ဖိထားပါ။ ‘L’ ကို နှိပ်ပါ။
- Shutdown icon ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်သလို လိုအပ်သလို ပြန်လည် ၀င်ရောက်နိုင်တဲ့ Log-on buttom ကလေးလည်း ပါ၀င်ပါတယ်။
31 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 21st January 2010, 9:22 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2009-09-19
these r very good posts............ :gp :gp :gp
thanks for ur sharing :cheer :cheer :cheer
i m waiting for u ............................please continue......... :find :find :find
32 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 22nd January 2010, 10:42 am
ကျနေ်ာတငိထားတဲ့ ဒီလင့်မှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို
ogre (Moderator Staff) နဲ့ ပေါင်းလိုက်ရင်ကောင်းမလား ခင်ဗျာ
33 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 22nd January 2010, 1:16 pm
Ok I will Merge these two topics
34 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks] on 22nd January 2010, 1:25 pm
ပေါင်းပြီးပြီနော်။ Post တွေက Date, Time နဲ့ စီထားတာဆိုတော့ အပေါ်ရောက်နေတယ်။ ဟီး
35 Re: Some Of Computer Problem [Tips & Tricks]